Meksika: Lahatsarin’ny Horohorontany 7,8 Tsapa Tany Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Marsa 2012 17:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, বাংলা, македонски, English
Ny hovitrovitry ny tany 20 Marsa 2012. Vaikany 7,9 amin'ny maridrefy Richter (tany amin'ny foibeny). Foibeny: Ometepec, fanjakan'i Guerrero, Meksika. Fotoana 12:06 PM, lahatsary noraiketina tany: tanànan'i Puebla…
Tany Mexico City:
El sismo duro alrededor de 2 minutos y medio. Ya todos en la calle aun nos seguíamos movie do de un lado a otro.
Naharitra roa minitra sy tapany ny fihovitrovitry ny tany. Na dia efa teny an'arabe avokoa aza izahay rehetra dia mbola nivembena ihany.
Teny ambony building tao Mexico City:
Teo anoloan'ny Kianja Tlatelolco tao afovoan-tanàna:
Ny lahatsary hafa momba ny fihovitrovitry ny tany moa dia ifampizarana amin'ny alalan'ny twitter.